I-Douelle - Indlu enkulu kwiindonga zeLoti
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguMagali
Ukulungiswa ngokupheleleyo kwendlu yedolophu yakudala, esembindini welali yaseDouelle (iikhilomitha ezili-10 ukusuka eCahors), inika indawo ezolileyo nenoxolo elunxwemeni lweLoti, enombono ophefumlayo womlambo kunye neenduli.
Iivenkile kunye nemisebenzi kumgama weemitha ezimbalwa ngeenyawo.
Ukwamkela: abantu abayi-8 (ukuya kubantu abayi-10 ukuba iintsapho zinabantwana).
Izixhobo ezininzi kunye neenkonzo.
Quercy et Lot: iindawo ezininzi zabakhenkethi ukufumana.
Ilungele iholide ezolileyo okanye ukunxibelelana ngomnxeba.
• Igumbi lokuhlala, igumbi lesidlo sasemini
• Ikhitshi elinezixhobo
• Iveranda enkulu
• Igumbi lokuhlambela (ishawa, isinki, umatshini wokuhlamba)
• iWC eyahlukileyo
• I-20m2 i-terrace ikuvumela ukuba wonwabele umbono.
• Igumbi lokulala eli-1 elikhulu: Ibhedi e-1 yabantu ababini, isithuba se-ofisi esineloggia enombono weLoti kunye negumbi lokuhlambela elidityanisiweyo (ishawari yokuhamba) + WC.
• 2 amagumbi okulala aneebhedi eziyi-140
I-1 enkulu yokulala ye-attic ye-50m2 kuquka iibhedi ezi-4 ze-90 kunye ne-BZ. Eli gumbi elikhulu libandakanya igumbi lemidlalo elihle, kunye neNintendo Wii console, iTV TNT, iDVD player + iincwadi ezininzi, imidlalo kunye nezinto zokudlala ezikhoyo.
Indlu ekwilali yelali, elunxwemeni lweLothe kunye neemitha ezimbalwa ukusuka kuzo zonke iivenkile (ivenkile yokutya, amaphephandaba, indawo yokubhaka, iipizza, iikhefi, iindawo zokutyela, icuba, iPosi, umlungisi weenwele ...).
Izinto ezininzi ezenziwa elalini (ukuqubha, ukukhwela iphenyane, ukubheqa, i-gabarot, izikhephe ezinyovwayo, ukukhwela inqanawa, ukukhwela inqanawa, ukukhwela intaba, ukuloba, intenetya ...) kunye kufutshane (igalufa, ukukhwela umthi, ukukhwela ihashe ...)
Umbuki zindwendwe ngu- Magali
Mna ngokwam andizukubakho kwindawo kodwa ndihlala ndifumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile ngayo nayiphi na imibuzo. Umntu uya kukwazi ukuhamba ukuba kuyimfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Douelle